သင်သိသင့်ပါတယ်တစ်ဦးကပူအရောင်းရဆုံးစမတ်မူးယစ်ဆေး: Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်! | AASraw Nootropics
/ဘ‌‌လော့ခ်/modafinil/သင်သိသင့်ပါတယ်တစ်ဦးကပူအရောင်းရဆုံးစမတ်မူးယစ်ဆေး: Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်!
အပေါ် Posted 01 / 19 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် modafinil. ဒါဟာရှိပါတယ်2မှတ်ချက်.
Modafinil, အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Provigil, Smart မူးယစ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ညအချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သူတွေကိုအတွက်စီစဉ်ထားအိပ်ပျော်နေတဲ့နာရီအတွင်း narcolepsy ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်အကျွံအိပ် (အလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်ငိုက်ခြင်းဖြစ်စေသည်တဲ့အခွအေနေ) ဆက်ဆံပါသို့မဟုတ်စီစဉ်ထားနှိုးနာရီနှင့်အခက်အခဲအိပ်ပျော်ကျသွားသို့မဟုတ်အိပ်ပျော်တည်းခိုနေစဉ်အတွင်းအလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါ (အိပ် shift ဖို့အသုံးပြု, Modafinil ဝယ်ဖို့သို့မဟုတ် ဆိုင်းအလှည့်ပေါ်) ။
လူနာခေတ္တအသက်ရှူရပ်သို့မဟုတ်အိပ်နေစဉ် shallowly အကြိမ်ပေါင်းများစွာရှူရှိုက်ထို့ကြောင့်အလုံအလောက်မရပေရာတစ်ဦးအိပ်စက်ခြင်းရောဂါ; Modafinil ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ် / hypopnea syndrome ရောဂါ (OSAHS ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်အကျွံအိပ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့အသက်ရှူ devices များသို့မဟုတ်အခြားကုသမှုများနှင့်အတူလည်းအသုံးပြုပါသည် မှေးကွိုအိပ်ပျော်ခြင်း) ။ Modafinil နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်အေးဂျင့်ကိုခေါ်ဆေးတစ်လူတန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအိပ်စက်ခြင်းမနိုးထိန်းချုပ်သောဦးနှောက်၏ဧရိယာ၌အချို့သောသဘာဝအတ္ထုများ၏ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
Modafinil အလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရတဲ့၏အရပျကိုယူမထားဘူး။ ဒါဟာမောပန်းခြင်းဆက်ဆံပါသို့မဟုတ်တစ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူတွေကိုအတွက်အိပ်စက်ခြင်းကိုချွတ်ကိုင်ဖို့အသုံးပြုမရသင့်တယ်။
Modafinil အမှုန့်, Modafinil များ၏ကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်အဖြူရောင်အမှုန့်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာသည်လူအများစုကနေ Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ် Modafinil အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထို့နောက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ် AAS အတွက် Modafinil မှုန့် Modafinil ဆေးပြားနှင့် injections.Details နဲ့တူပုံစံများ, အမျိုးမျိုးတို့ကိုထဲသို့အောင်:
ပျော်ဝင်: ပျော်ဝင်ရေထဲမှာပျော် acetone, အီသနော, ethyl အီ, ethyl acetate အတွက်
ကဖိန်းဓာတ်ကိုမကဲ့သို့သော narcolepsy နှင့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်အဖြစ်အိပ်ပျော်ခြင်း-related အခြေအနေများဆက်ဆံဖို့ 1998 ကတည်းက US မှာသတ်မှတ်ထားသည့်ထားပြီးဖြစ်သော Modafinil, အများကြီးရွှင်လန်း heightens ။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရေအတွက်ကိုကအခြားသိမြင်မှုအကြိုးခံစားခှငျ့ပေးနိုငျကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုမညီမညာဖြစ်နေသောခဲ့ကြသည်။
မကြာသေးမီကဥရောပ Neuropsychopharmacology ထုတ်ဝေနေတဲ့ Meta-analysis သည်ခုနှစ်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နှင့်ဟားဗတ်ဆေးပညာကျောင်းမှသုတေသီများ modafinil လို့ခေါ်တဲ့မူးယစ်ဆေး, ပုံမှန်အားဖြင့်အိပ်စက်ခြင်းမမှန်ကုသရန်အသုံးပြုသည်သောအရာကိုကောက်ချက်ချတစ်သိမြင် Enhancer ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ကြောင့်ပုံမှန်လူတွေပိုကောင်းထင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ရှုပ်ထွေးမှုများကိုတက်ကိုရှင်းလင်းစေရန်, အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ထို့နောက်သုတေသီများအထူးသ modafinil သိမှတ်ခံစားမှုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုကြည့်ရှုကြောင်း 24 နှင့် 1990 အကြားထုတ်ဝေ 2014 လေ့လာမှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
ဥရောပ Neuropsychopharmacology အတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့သည့်၎င်းတို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်သူတို့ modafinil အကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်များကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရလဒ်များထိခိုက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတာဝန်များကို-ထိုကဲ့သို့သောအများအပြားအကျိုးခံစားခွင့် detect မသေချာသော-ခဲ့ဘူးအရောင်ကိုမြင်လျှင်ပြီးနောက်အထူးသဖြင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်အဖြစ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မူးယစ်ဆေးရဲ့သက်ရောက်မှုကြည့်ရှုကြောင်းသုတေသန။
သို့သျောလညျး modafinil သို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပြီးနောက်ရှုပ်ထွေးပြီးခက်ခဲတာဝန်များကိုလုပ်ဖို့သင်တန်းသားများကိုမေးမလျှောက်သောလေ့လာမှုများ "အဆင့်မြင့်သိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို-အဓိကအားအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဒါပေမယ့်လည်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်သင်ယူမှုက" ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည်အကြောင်းအကြံပြုသောမူးယစ်ဆေးဘမ်းဆီးသောသူတို့အားပိုမိုတိကျကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ကရှင်းပြသည် လေ့လာမှု co-စာရေးဆရာ Ruairidh Battleday ယခုဆေးပညာဆရာဝန်နှင့် Ph.D ဘွဲ့ကို ကယ်လီဖိုးနီးယားဘာကလေတက္ကသိုလ်မှကျောင်းသား။
Modafinil အမှုန့်, modafinil များ၏ကုန်ကြမ်းအဖြစ်ကိုလည်း nootropic အဖြစ်လူသိများနေတဲ့စမတ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာနည်းလမ်းများ (ကဒုတိယအတွက်ပိုပြီး) အမျိုးမျိုး၌သင်တို့၏သိမြင် function ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရဲ့, အဲဒီမှာစမတ်ဆေးပဒေသာသော်လည်း, modafinil အနည်းငယ်အကြောင်းပြချက်များအတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တဲ့လူတန်းစားအတွက်ရပ်တည် modafinil အားသာချက်အချို့နေသောခေါင်းစဉ်:
Modafinil မျိုးတစ်လှုံ့ဆော်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ပေမယ့်တကယ်တစ်ဦး eugeroic ရဲ့ - တစ်နိုးနိုးကွားကွား-မြှင့်တင်ရန်အေးဂျင့်။ အများဆုံးဂန္ထဝင်စိတ်ကြွဆေးလုပ်ပေးတူသောဒါဟာသင်မြန်ဆန်သို့မဟုတ်နိူးစနှောစေပါဘူး။ Modafinil ကိုလည်းပျက်ကျမှုသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်း, များစွာသောမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများပြုပါလမ်းမှမရှိပါ။
တကယ်တော့, modafinil လူတွေကိုစွဲလမ်းမှုကိုကန်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာအဘယ်သူမျှမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ Modafinil အလွန်လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ ငါ neurofeedback နှင့်အတူယခုတွင်ငါသည် modafinil ကနေအကျိုးအများကြီးမမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်အများကြီးကိုငါ့ဦးနှောက်ကို hacked ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါ 10 နှစ်ပေါင်းနေ့တိုင်း ယူ. ထိုအခြိနျကာလအတှငျးကမဆိုကြင်နာမရှိပြဿနာများကိုမြင်တော်မူ၏။
ဒါဟာတကယ်ပဲလည်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျအစဉျအမွဲ Bradley Cooper နှင့်အတူအဆမဲ့ရုပ်ရှင်မြင်ပြီလော ဒါဟာ modafinil အပေါ်အခြေခံပြီးရဲ့။ ဤသည်ပစ္စည်းပစ္စယအဘယ်သူမျှမအားနည်းချက်တွေမှအနည်းငယ်နှင့်အတူ, သင်လူစွမ်းကောင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့ပေးသည်။
Narcolepsy များအတွက် Modafinil အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Narcolepsy အလွန်အကျွံအိပ်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာအိပ်စက်ခြင်းရောဂါဖြစ်ပါသည်, အိပ်ပျော်ခြင်းသွက်ချာပါဒ, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း, နှင့် (မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောရယ်မောခြင်းအဖြစ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုခြင်းဖြင့်အစပျိုးကြွက်သားထိန်းချုပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှု,) cataplexy ၏အချို့ကိစ္စဖြစ်စဉ်များတွင်။ Narcolepsy ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်အညီအမျှဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် 1 လူတွေအတွက်အကြမ်းဖျင်း 2,000 ထိခိုက်ထင်နေသည်။ အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာငယ်စဉ်ကလေးဘဝသို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ထင်ရှားပေမယ့်လူအတော်များများဟာသင့်လျော်သောရောဂါရတဲ့မတိုင်မီနှစ်ပေါင်း narcolepsy လက္ခဏာတွေရှိသည်။
narcolepsy နှင့်အတူပြည်သူ့တစ်နေ့တာအတွင်းအလွန်အိပ်ချင်ခံစားရနှင့် involuntarily ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများစဉ်အတွင်းအိပ်ပျော်စေနိုင်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနိုးနေစဉ်အိပ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင် narcolepsy များတွင်နိုးနိုးကြားကြားနဲ့အိပ်ပျော်ကြားရှိပုံမှန်နယ်နိမိတ်, မှုန်ဝါးနေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, cataplexy နှိုးနာရီအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေ REM sleep ၏ကြွက်သားသွက်ချာပါဒပါပဲ။ ဒါဟာလျှော့မေးရိုး, ဒါမှမဟုတ်လက်နက်များ၏အားနည်းချက်, ခြေထောက်, ဒါမှမဟုတ်စည်မှဦးဆောင်ပြုလုပ်ကြွက်သားသေံ၏ရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့အိပ်ပျော်ကျသွားသို့မဟုတ်နှိုးထအဖြစ်ညအချိန်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအိပ်မက်ဆိုးနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ် narcolepsy နှင့်အတူပြည်သူ့လည်းအိပ်မက်ကဲ့သို့စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းနှင့်သွက်ချာပါဒကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်။
1 ရိုက်ပါ: cataplexy နှင့်အတူ Narcolepsy
2 ရိုက်ပါ: အဓိကအားဖြင့်အလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်ကပါဝင်ပတ်သက်ရသော cataplexy မပါဘဲ Narcolepsy,
3 ရိုက်ထည့်ပါ: က Secondary narcolepsyThis, အ hypothalamus တစ်ခုဒဏ်ရာကနေအိပ်ပျော်ခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါအဖြစ် Narcolepsy, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရန်သင့်ခုခံတိုးပွားလာအသုံးပြုပုံတွေအများကြီးလူတွေကိုအကူအညီပေးခဲ့ကြဘူး, များစွာသောလူ, သူတို့ရဲ့အလုပ်, ၎င်းတို့၏အသက်, Modafinil ရဲ့လာထိခိုက်စေနှင့်သင့် mood.Modafinil တိုးတက်စေခဲ့ပါသည်ပင်အိပ်ပျော်ခြင်းဆုံးရှုံးဆရာဝန်တွေအတွက်ဦးနှောက် function ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းမမှန်ထံမှခံရသောသူတို့အဘို့, ကတိုးချဲ့သိမှတ်ခံစားမှုမနိုးခွင့်ပြုအတွက်အလွန်အမင်းအကျိုးရှိသောနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအာရုံတိုးတက်အောင်, ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သဘောမျိုးနှင့်အတူဤအသုံးပြုသူသည်။ ဤသည် narcolepsy ခံစားနေရပြီးလူနာတွေအတွက်အထူးသဖြင့်မှန်သည်။
Narcolepsy နိုးနိုးကွားကွား-မြှင့်တင် peptides အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား peptides အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ရာ orexins အဖြစ်လူသိများကြသည်။ Modafinil ယူပြီးတဲ့အခါမှာ, ဤအာရုံခံ activated ဖြစ်လာကြောင်းယုံကြည်ရသည်။ ဤသည်အဖြစ်ကောင်းစွာလှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်ဖို့စဉ်းစားထားသည်။
အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးတိုးတက်လာသောစိတ်ဓါတ်များအစီရင်ခံခဲ့ကြသည်။ Dopamine လုပ်ဆောင်ချက်၏နည်းလမ်းအတွင်းသေးငယ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှယုံကြည်နေသည်, ဒါကြောင့်ဒီ related နိုငျသညျ။
နိုးနိုးကွားကွား၏ 10-12 နာရီပေးပါသည်။ Modafinil (ပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်န်ထမ်းများ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ) နံနက်ယံ၌ယူရပါမည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများကသူတို့ကိုပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်, ပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်လာသည်။ အသုံးပြုသူများသည်မည်သည့် Jitter တွေ့ကြုံခံစားကြဘူး မှလွဲ. ဤဖိန်းဓာတ်ကဲ့သို့တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆိုးကျိုးများလည်းပိုရှည်ဖိန်းထက်ကြာရှည်။
လေ့လာရေးကြောင်း Modafinil တိုးပြခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများကထိုကဲ့သို့သောအိပ်ရေးပျက်အဖြစ်အချက်များဆန့်ကျင်နေတဲ့ကျန်းမာပြည်နယ်ဖြစ်သည့်အခါသိမြင် function ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ ပိုများသောသုတေသနယခုထိဒီအလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများအတည်ပြုရန်ကောက်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
အကျိုးကျေးဇူးများအများစုနိုးနိုးကွားကွားနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်ကတည်းကအများအပြားကျောင်းသားများကိုယှဉ်ပြိုင်စာမေးပွဲကာလအတွင်းကဒီဥစ္စာကိုယူပြီးနေကြသည်။ ဒါကဦးဆောင်ဗြိတိန်တက္ကသိုလ်များအချို့မှာမြင်ကြပြီ။ ပိုပြီးသိမြင်မှုကိုလည်းတိုးတက်စေနိုင်ဖြည့်စွက်နဲ့ stack ထဲမှာ Modafinil အသုံးပြုခြင်းအကြောင်းသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ညွှန်ကြားအဖြစ် Modafinil အမှုန့်ကိုအသုံးပြုသည်သောအခါ, လုံခြုံခြင်းနှင့်ထိရောက်သောဖြစ်စဉ်းစားသည်။ အဘယ်သူမျှမအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ သို့သော်သာမန်အသုံးပြုမှုကိုတစ်လျှောက်လုံးအစီရင်ခံပျော့ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိခဲ့ပါပြီ။ သင်တို့သည်ဤရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားရပါလျှင်: ခေါင်းကိုက်ခြင်း, အစာစားချင်စိတ်, ပျို့, ကိုယ်အလေးချိန်, ကွောနှင့်သွေးတိုးရောဂါများမရှိခြင်း, သင့်ဆရာဝန်ဟောပြောလော့။ သင်တို့သည်လည်းသင်တို့ကိုရှိစေခြင်းငှါမဆိုဓာတ်မတည်နှင့် ပတ်သက်. သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အဖျား, လည်ချောင်းနာခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောအရည်ကြည်ဖုနှင့်အတူအန်, ကွာ, နှင့်အနီရောင်အသားအရေအဖု;
ကွိတျ, ပြင်းထန်ဉျြးဖဉျြး, ထုံ, နာကျင်မှု, ကြွက်သားအားနည်းခြင်း,
စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ကျူးကျော်; သို့မဟုတ်
ရင်ဘတ်နာကျင်မှု, မညီမညာဖြစ်နေသောနှလုံး beats ။
သင်သည်မည်သည့်ယခင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများရှိပါက, သင်အသုံးမပြုခင်သင့်ဆရာဝန်အားဟောပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားနှလုံးအခွအေနစိတ်ကြွဆေးနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အလားတူမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, အသည်းပြဿနာများ, စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကို, ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအဘို့အစစ်မှန်တဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
တချို့ကဆေးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်သင့်ဆေးဝါးများမည်သို့အလုပ်လုပ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ Modafinil နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်နှင့်အတူဆရာဝန်သို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးများ၏စာရင်းကို ယူ. သူတို့ Modafinil နှင့်အတူအပြန်အလှန်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုမေးပါ။ ဒါဟာသင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိ. ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ် သာ. ကောင်း၏။
ငါ modafinil အမှုန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိသင့်အရေးကြီးဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကဘာလဲ?
modafinil သို့မဟုတ် armodafinil (Nuvigil) ယူပြီးနေချိန်မှာသင်ကအစဉ်အဆက်အနေနဲ့မတည့်တုံ့ပြန်မှုသို့မဟုတ်အရေပြားအဖုခဲ့ကြလျှင်သင်ဒီဆေးဝါးကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။
Modafinil တစ်ဦးဆေးရုံများတွင်ကုသမှုမလိုအပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ပြင်းထန်ဖြစ်မည်အကြောင်းအသားအရေတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သင်တစ်ဦးအရေပြားအဖုသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့ချုပ်, အရည်ကြည်ဖုသို့မဟုတ်ကွာ, ပါးစပ်အနာစိမ်း, ဒုက္ခအသက်ရှူခြင်းသို့မဟုတ်မျို, အဖျား, သင့်ခြေထောက်ရောင်ရမ်းခြင်း, မှောင်မိုက်ဆီး, သင့်အသားအရေသို့မဟုတ်မျက်စိအဝါရောင်, ဒါမှမဟုတ်အတွက်ရောင်ရမ်းခြင်းရှိပါကဒီဆေးဝါးကိုယူပြီးရပ်တန့်နှင့်အရေးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရ သင်၏မျက်နှာ။
အွန်လိုင်း Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်
သင်ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ် Reseller များအတွက် Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ဒီသင်သည်သင်၏အသက်တာကိုပိုကောင်းစေမယ်လုပ်ချင်တစ်ခုခုမရှိ, ကိစ္စလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်နေ့စဉ် life.Luckily လျှင်ကြောင့်အွန်လိုင်း Modafinil အမှုန့်ဖို့တကယ်လွယ်ကူပိုမိုမြင့်မားသန့်ရှင်းစင်ကြယ် modafinil ဘာတစ်ကြိမ်နှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့ဆုံးဖြတ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအငျတာနကျပျေါတှငျ Modafinil အမှုန့်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်တဦးတည်းကိုလက်စသတ်သို့သင် clients များနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသူတို့အယူတဲ့အခါသင်ကြောင့်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်၏အမြောက်အများမူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်နိုင်သောတွေ့ရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ကလျှင်သူတို့ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ကိုအောင် start ပြီးတာနဲ့ ဒါကြောင့်များစွာသောလူပြီးသားတောင်းသည်အတိုင်း 'တကယ်ထိုကဲ့သို့သောအကြီးသိမြင် Enhancer ပြန်လည်။ သင်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးချင်လျှင်, သင်ဖို့ထက်ပိုမိုတစ်ခုတည်းတစ်လရဲ့ supply.How အပေါ်တက်စတော့ရှယ်ယာချင်နိုငျမညျနညျးကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး
Tags: Modafinil အမှုန့်ကိုဝယ်, Modafinil အမှုန့်, Modafinil အမှုန့်ပေးသွင်း, ကုန်ကြမ်း Modafinil အမှုန့်
4042 Views စာ
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က09 မှာ 11 / 2018 / 9: 06 ညနေ
ကို Dmitry09 မှာ 11 / 2018 / 7: 53 နံနက်
ကုန်ကြမ်း trenbolone acetate အမှုန့်ရောနှောဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?	sildenafil citrate အမှုန့်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို